Ndị Alọr Ewere Ọñụ Rie Ji Ọhụrụ | Igbo Radio
Ndị Alọr Ewere Ọñụ Rie Ji Ọhụrụ
Igbo sị na ọ na-abụ a kọọ gwute, a sị na ahọ amagbuo onwe ya; maka na ọ na-abụ a rụọ n'anwụ, e rie na ndò.
Ka ọ dị taa, oke ọñụ dara nnọọ n'obodo Alọr, dị n'okpuru ọchịchị ime obodo Idemili South, dịka ndị obodo ahụ mere otu n'ime oke mmemme e jiri mara ndị Igbo, bụ mmemme iri ji ọhụrụ ha nke ahọ 2020.
Oke mmemme ahụ e mere n'ịgbaso ntụziaka e nyere maka ọrịa korona bụ nke weere ọnọdụ n'obi eze ọdịnala obodo ahụ, bụ Igwe Mac-Anthony Okonkwo, ma bụrụkwa nke dọtara ọtụtụ ụmụafọ obodo ahụ, ma ọnọ n'ụlọ, ma ọnọ n'ụzọ ijè, tinyere ndị enyi, ndị nwadiala, ikwu na ibe, na ndị ọzọ siri ebe dị iche iche isoro ha ñụrịa.
Ka ọ na-emezùpụta emume ịwa ji kpọmkwem na mmemme ahụ, Igwe Okonkwo kelere Chineke maka onyinye ndụ na ahụ isi ike o nyere ha, ha wee kọnye ji n'ala ma dịkwa ndụ gwute ya. O kelekwara Chineke n'ihi ụbara ngọzị ya n'isi ụmụafọ Alọr, Ndị Anambra, Ndị Igbo, na ụmụafọ Nigeria n'izugbe.
Ọ gọkwazịrị ọfọ ogologo ndụ, ihe akụakụ na ihe enwe enwe, udo tọrọ àtọ na ọganihu n'isi obodo ahụ na ụmụafọ ya niile, n'agbanyeghị ebe na ebe onye anọla; ma kpee ka Chineke chekwaba onye ọbụla pụọ n'ọrịa nje korona.
Ọ kọwara iri ji ọhụrụ dịka nnukwu mmemme pụrụ iche n'ala Igbo, dịka ọ bụ ihe doro anya na ji bụ eze ihe a kọrọ n'ubi, bụkwazị nke mere ndị Igbo ji akwanyere ya ùgwù pụrụ iche kwa ahọ ọbụla. O kwukwara na mmemme so n'otu mmemme na-akpọkọlọta ụmụafọ obodo ahụ ọnụ, iji kelee Chineke maka ọrụ ọma ya ma kpakwa maka ọdịmma obodo ahụ na ọganihu ya.
N'okwu nke ya, Onoowu obodo ahụ, bụ Dọkịta Benedict Udeze kelekwara Chineke maka udo na-achị obodo ahụ, ma kpee ka nke ahụ dịgide ọkpụtọrọkpụ, n'ihi na ọ bụ ebe udo dị ka ọganihu na-adị.
Eze ọdịnala obodo Akwụeze, bụ Igwe Christopher Eze-Nebo, onye bịara isoro obodo ahụ ñụrịa, kpọkuru ụmụ Igbo ka ha jigidesie omenala ha ike, kọwàrà mkpa ọ dị ịga n'ihu na-akwalite omenala iri ji ọhụụ na omenala ndị ọzọ e jiri mara ndị Igbo, n'ihi oke uru dị iche iche nke ahụ na-eweta.
Ịgba egwu ọdịnala dị iche iche nakwa igosi ihe ngosi dị iche iche e jiri mara Igbo so n'ihe pụtakarịchara ìhè na mmemme ahụ. Ihe ndi ọzọ merekwara ka mmemme ahụ zaa aha ya bụ: iwa na ikesà ji ọhụụ ahụrụ ahụ, bụ nke e jiri mmanụ akwụ na-akwo muri muri, ụkpaka, ose, na akwụkwọ ụtazị mara abụba wee chọọ mma, tinyere mmanya ngwọ jụrụ oyi na nkwu elu, e jiri gbanyere ya ụgbọ nwamkpi.